Iindaba-Grand Petrochemical Co, Ltd
Intlanganiso yolawulo ye-Mid-2020 yabanjwa ngempumelelo
Nge-25 kaJulayi, i-2020 yeNkomfa yoLawulo lwaMinyaka ingama-XNUMX yeGrandource Group Co, LTD enomxholo "ojolise kwezorhwebo, ubugcisa kunye noqoqosho" yabanjelwa eLangham Indawo, kwiNdawo yeNkcubeko ye-Ningbo.
Kutheni kukho into engaziwayo yokuvula into xa usebenzisa umatshini oshushu wokunyibilikisa ukutywina ibhokisi?
Oomatshini bokuncamathela okushushu banyibilikisa basetyenziswa kakhulu kushishino lokupakisha, kubandakanya oomatshini bokuncamathela abashushu abanyibilikayo, oomatshini bokuncamathela abashushu abanyibilikayo, njl, njl,…
Izibambiso ezisetyenziswa kwizitikha ziyahlulahlulwa ngohlobo lwe-emulsion, uhlobo lwesinyibilikisi samanzi, uhlobo lwesinyibilikisi, kunye nohlobo olushushu lokunyibilika.
Izinto ezingafunekiyo ezishushu zincibilikisa iidayile!
Izixhobo zokuncibilikisa ezishushu zisetyenziswa ngokubanzi kwiimveliso zococeko kwaye zidlala indima ebalulekileyo kulwakhiwo olupheleleyo kunye nomsebenzi weemveliso zococeko.
Uyenza njani into eshushu-encibilikayo isincamathele
Intonga yeglue iyimveliso ephuhliswe kwiminyaka yakutshanje. Sebenzisa ubushushu ngombane ukunyibilikisa iglu. Iglue ikhutshiwe ukusuka kwi-nozzle yokulandela ukubambelela. Kulula ukusebenza kwaye inejubane lokunyanga ngokukhawuleza.
Inkcazo yeendawo ezinamathela kwirabha zenziwa ngerabha elenziweyo okanye irabha yendalo njengezinto ezisisiseko.